» ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को व्यापारमा गीतले योगदान गर्ला ?
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को व्यापारमा गीतले योगदान गर्ला ?
२ पुष २०७६, बुधबार ०६:२४
आउँदो फागुन २३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको सुदर्शन थापा निर्देशत यस वर्षको प्रतिक्षीत फिल्ममध्ये एक ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ का लागि पनि अर्जुनले नै गीत तयार पारेका छन् । यो फिल्मको पहिलो गीत ‘तिम्रो घरको वरिपरि’ अहिले दर्शकको जिब्रोमा झुण्डिएको छ । यूट्युब रिलिजको पाँच दिनमा यो गीतमाथि १७ लाखभन्दा बढीको नजर परिसकेको छ ।
८५ हजार लाइक्स प्राप्त गीतलाई ९ हजार कमेन्ट मिलेको छ । गीतलाई नराम्रो लेख्नेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । अधिकांशले गीतको अडियो र भिडियोको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । धेरैजसो दर्शकहरुले गीतको भिडियोमा फिचर्ड फिल्मका प्रमुख अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री पूजा शर्माको जोडी सुहाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जसले निर्माण टिममा खुसी छाएको छ ।
नेपाल र भारतको सिमानामा पर्ने सन्दकपुर गाउँ, पानीटारको चियाबारी, इलाम, पाँचथर लगायतका स्थानमा सात दिन लगाएर तयार पारिएको गीतलाई सौरभ लामाले खिचेका हुन् । अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा संगीत रहेको गीतमा सोनम तोप्देन र अस्मिता अधिकारीको स्वर छ । यो गीतले फिल्मको हाइप निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको निर्देशक सुदर्शन थापा बताउँछन् ।